कठै ! दुई बच्चाको शब खरबारीमा फेला , आमाको शब खोल्सामा फेला , दया हुनेले मात्र Rip लेखि सेयर गर्नुहोस् – Taja Khawar
कठै ! दुई बच्चाको शब खरबारीमा फेला , आमाको शब खोल्सामा फेला , दया हुनेले मात्र Rip लेखि सेयर गर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २३, २०७८ समय: ०:४२:४९
ढुंगामाटोको घर, सामान्य आर्थिक अवस्था। अकल्पनीय दुःख’द् र बी”भ”त्स ह”त्या। एकै परिवारका ६ जनाको ह”त्याले सिंगो गाउँ त्र”सित छ।
संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोलागाउँका बौदमान कार्कीको परिवारका ६ जनाको वी”भत्स ह”त्या भएको छ। सोमबार बिहान घरभित्र र नजिकै परिवारका सदस्यको श’व फे’ला परेको छ। तराईमा जग्गाको बैना गरेर बौदमानको परिवार जग्गापास गर्न जाने तयारीमा थियो।
तेजबहादुरकी ५२ वर्षीया पत्नी कमला र ३२ वर्षीया बुहारी रञ्जना कार्कीको श”व घर नजिकैको खो”ल्सामा भेटिएको थियो। ११ वर्षीय नाति दिपेन र ७ वर्षीया नातिनी गोमाको श”व घरमाथिको खरबारीमा भे’टिएको प्र”हरी निरीक्षक खतिवडाले बताए।
जग्गापास गर्न लागेको खबर पाएकाले घरमा पैसा राखेको हुन सक्ने आ’शंकामा उनीहरूको ह”त्या भएको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ। तीजपछि उनीहरू तराईमा जग्गापास गर्न जाने तयारीमा रहेको मृ’तकका आफन्तले बताए।
जिल्ला प्र’हरी कार्यालयका डीएसपी लालध्वज सुवेदीले भने। मृ’तक सबैका श’व घरबाट सय मिटरको आसपासमा भेटिएका थिए। सोही घरमा रहेका ८५ वर्षीय बौदमान भने स’कुशल छन्। उनी कान कम सुन्ने र आँखा पनि ध’मिलो देख्छन्। बौदमानकी ८४ वर्षीया श्रीमती पार्वता कार्की भने ‘भेटिएकी छन्। घ’टना रह’स्य’मय छ। स’कुशल भेटिएका ८५ वर्षीय बौदमान आइतबार साँझ खाना खाएर सुते।
बिहान उठेर हेर्दा कोही नदेखेपछि खोजी गर्ने क्रममा बौदमानले सबैभन्दा पहिले श्रीमतीलाई मृ’त भेटे। त्यसपछि उनले छिमेकीलाई खबर गरेका थिए। छिमेकीले प्र’हरीलाई खबर गरेपछि बिहान ११ बजेतिर प्र’हरी घ”टनास्थल पुगेको थियो। बौदमानका ५८ वर्षीय छोरा तेजबहादुर कार्की गम्बुट लगाएकै अवस्थामा मृ’त भेटिएका थिए। काम गर्न जाँदा लगाउने लुगा लगाएको र गम्बुट, चप्पलसहित भएकाले उनीहरूको
ह”त्या बिहान वा बेलुकीको समयमा भएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। गम्बुट र चप्पल लगाएकाले भा’ग्दाभाग्दै उनीहरूको ह”त्या भएको प्र”हरीको अनुमान छ। कृषि पेसामा आबद्ध सामान्य आर्थिक अवस्था भएको परिवारको ह”त्या किन गरियो भन्ने आँकलन गर्नै सकिएन, लक्ष्मीभक्तले भने। ह”त्यापछि गाउँ नै त्र’सित रहेको उनले बताए।
Last Updated on: September 8th, 2021 at 12:42 am